Inketho kangcono yokuhlala izivakashi ebhishi Vityazevo - ezindlini ezamukela izihambi. "Solar House" ingenye enjalo yangasese mini-amahhotela. Uyobizwa anikezelwe athikili yethu. Encazelweni yalokho endlini isivakashi thina babeqondiswa okungaka nge idatha wehhotela njengoba impendulo zezivakashi abavakashele ke ehlobo bese kuthi ngesikhathi sasehlobo Indian ka 2016. Siphinde sinikeze amanani cishe ebhishi isizini entsha.
Iphi indlu isivakashi "Indlu Solar"
It vityazevo a ophithizelayo mini-amahhotela. Abanikazi bezindawo abanikeza egumbini, njengoba umthetho, hhayi umcabango ezihlotshisiwe kakhulu. Ukuvula mini-ehhotela, avame ukubizwa ngokuthi yayo "Wave", "seagull", "South", futhi banalities efanayo. Ngakho-ke kuvela ukudideka. Ngo Vityazevo kukhona okungenani ezintathu mini-ihhotela elinegama elithi "Sunny." Okokuqala, it is esachazwa guest house wethu lapha. Itholakala at Ibhethri Street, indlu 33 kukhona "Sunny" (guest house, emgwaqweni Solar, Vityazevo, Ukwakha 32.) Futhi "On the Solar" - emgwaqeni efanayo, nje ngaphansi inombolo 21/1.
Ngakho, sinesithakazelo ekutheni yilona mini-ehhotela, esemgwaqweni ku ibhethri. Umkhakha wangasese e Vityazevo itholakala ngendlela yokuthi emabhishi kuphi ukuya kude. Kusukela ehhotela yangasese "Sunny House" ezivela olwandle udinga ukuthola imizuzu cishe abangamashumi amabili ijubane kokuphumula. Kodwa Izibuyekezo bathi ibattery emgwaqweni iseduze izitolo nezindawo zokudlela ezinhle ehlukahlukene. Kodwa le ndawo ithule cwaka futhi inokuthula.
Guest house "Sunny Ngendlu" (Vityazevo) siqukethe izakhiwo ezimbili isitini ku 2 futhi amathathu phansi. Cishe zonke amakamelo balcony yangasese. Ngikanye namalungu athile ungabona kolwandle bluish kude. Insimu mini-hhotela ebiyelwe itshe okusezingeni eliphezulu kocingo. Kutholwe ngaphakathi epaki, swimming pool, inkundla yokudlala, BBQ, kuvulandi ongaphandle nge-TV enkulukazi, futhi iziteshi satellite. Kukhona on ensimini yendlu wezivakashi ikhishi wabelane, okuyinto izivakashi ungasebenzisa. Izibuyekezo bathi zazingekho emigqeni futhi jostling awuzange waphawula. Esikhathini ekhishini kukhona igesi, isitofu, kuhhavini, microwave, iketela, eziningana umthamo amafriji ezinkulu. Kukhona izinto okupheka udla izinto. Babalelwa ku-swimming pool nge ilanga loungers ngoba amaningi bethamele ilanga. Igceke is kwavula ngokhethe enhle, kunezindlela imibhede.
Guest house "Sunny Ngendlu" (Vityazevo) ithatha izigaba ezahlukene izivakashi: kokubili ongaphakeme futhi Labo abasiqaphelayo induduzo. Esikhathini elisophahleni (cabanga, sesine) zitholakala yokuhlala eziyisisekelo. Babehlose uhlale abantu ababili noma abathathu. I izitezi kuthiwa matasa amakamelo samakamelo amancane. Baphinde babe umthamo ezahlukene. Kukhona amakamelo double futhi babekhokhelwa ngokuphindwe kathathu, ezinye zazo ziyizilimi banzi ngokwanele ukuze ikwazi ukwamukela lesi simenywa ezengeziwe. Izibuyekezo bathi leli lungiselelo kunenzuzo xaxa. Ngemva isivakashi izinkudla ku-Embhedeni owenezelwe kuholela kancane. Kodwa zonke amakamelo anemisila ifenisha entsha futhi zikhululekile. A yokugezela eseduze lokulala. Ikamelo has zonke Izinsiza ezifana ithelevishini, air conditioning. Amakamelo aphakeme esiqandisini. Amakamelo bahlanza njalo ngemva kwezinsuku ezintathu. Umbhede nelineni washintsha emva emihlanu - izinsuku eziyisikhombisa.
Sea futhi pool
Guest house "Sunny Ngendlu" (Vityazevo) itholakala endaweni Isizalo ahlanzekile. imizuzu engamashumi amabili ukuhamba - futhi uwena phezu ububanzi olunesihlabathi the resort. Ngo Vityazevo entry engajulile olwandle, okwenza emzaneni indawo okuyiwa ozithandayo imikhaya. Kodwa uma ucabanga ukuthi kolwandle ukuya kude, ehlukile element amanzi echibini lokubhukuda. Kuyinto encane, izivakashi uthi, ezine kuya kweziyisishiyagalombili amamitha, kodwa ehlanzekile efudumele. Eceleni kwe-swimming pool nge sun bed. Uma izivakashi mini-ehhotela zonke izingane, ngabo ukuze kufuthwe tank yakho egcwele amanzi afudumele.
Lokhu indlu isivakashi kuthatha izivakashi ukuhamba ezifuywayo. Ukuze abashayeli, yokupaka khulula iyatholakala. Emakamelweni futhi izenzo fast and free Wi-Fi. Izingane zingayithola i-ukugibela phezu senhliziyo, futhi izingane kukhona esihlalweni okusezingeni eliphezulu futhi playpen. Kunezinhlelo ikhokhwe. Ukuze uhlu lwabo yokukhathazeka ukusetshenziswa okugeza kanye sauna, ukuwasha izingubo, ukudluliswa kusuka futhi sezindiza noma isitimela esiteshini.
Indlu isivakashi "Sunny" (Vityazevo): Izibuyekezo
Izivakashi iholidi baye muva kule ehhotela, wancoma indawo, umhlobiso amakamelo kanye ezindaweni. Yonke indawo ebusa nokuhlanzeka nokuhleleka. Ikakhulukazi Izibuyekezo uqaphele umoya yokwamukela, okusekelwa abanikazi endlini wezivakashi abasebenzi friendly. Futhi izivakashi bathandile indawo mini-ehhotela. Ekuhambeni ukusondela ukuba isivakashi ndlu ugijima ukuvakasha "Paralia". Kulesi Boardwalk kukhona amathilomu eziningi, zokudlela kanye nezitolo, kanye ema-disco, kuma-nightclub nasezindaweni ipaki. Nokho, ngomsindo owawenziwa kumnandi kwi Boardwalk e Vityazevo awufiki izakhamuzi endlini wezivakashi kungaphazamisi ukuphumula yabo.
Kufanele yini ngiye Thailand ngo-February: abahambi iseluleko